टाइल्सको शोरुम खोल्ने होडबाजी, अधिकारी भन्छन्, ‘सकारात्मक प्रतिस्पर्धाले सफल बनाउँछ’| Yatra Daily
टाइल्सको शोरुम खोल्ने होडबाजी, अधिकारी भन्छन्, ‘सकारात्मक प्रतिस्पर्धाले सफल बनाउँछ’
यात्रा डेली भदौ २८, २०७८ सोमबार
वीरगञ्ज, २८ भदौ । समयक्रमसँगै मानिसका दैनिक आवश्यक्ताहरु प्नि बढीरहेका छन् । आजभन्दा १ दशक अघिको समयमा हुँदै नभएका सामान पनि अहिले अपरिहार्य बनेका छन् । यसका अलावा आफ्नो जिन्दगी सुख शयलमा बिताउने चाहना हरकोहीको हुन्छ ।
‘छोरा हुनेको धन, भैँसी हुनेको बन’ भन्ने उखान उतिबेला चर्चामा थियो । तर अहिले हेदा चिटिक्क परेको घर भएपछि त्यो व्यक्ति नै हुनेखाने हो भनेर अड्कलवाजी हुने गर्छ । एक तवरले भन्ने हो भने घर भन्दा पनि आकर्षक घर बनाउने होडबाजी चलीरहेको बेलामा घरलाई अँझै आकर्ष बनाउनका लागि प्रयोग गरिने टाइल्सको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ ।
बढ्दै गएको टाइल्सको मागलाई परिपूर्ती गर्ने अभिप्रायले लगभग १० करोडको लागतमा काठमाण्डौको बसुन्धारा चौकी नजिकै सञ्चालनमा आएको स्टार्च मार्बल (भरमोरा) का प्रबन्ध निर्देशक निराजन अधिकारीसँग यात्रा डेलीका प्रबन्ध निर्देशक रामकुमार सर्राफले गरेको कुराकानीको सम्पादि अंश ।
टाइल्सको बिक्रि कक्ष सञ्चालन गर्छु भन्ने सोच कसरी पलायो ?
म विगत १ दशकभन्दा लामो समयदेखि संरचना निर्माणको क्षेत्रमा कार्यरत छु । देश तथा विदेशका थुप्रै शोरुमहरुको अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु । यसर्थ अहिले बजारमा पनि घरलाई सुन्दर बनाउने प्रतिस्पर्धा चलीरहेको बेलामा टाइल्सको शोरुम भन्दा अरु कुनै मेरो लागि सुहाउँदो हुन्छ जस्तो मलाई लागेन । त्यही भएर यसअघि नै आर्थीक नगरी वीरगञ्जमा पनि पहिलो पटक नै नयाँ र अत्याधुनिक किसिमले टाइल्सको शोरुम सञ्चालन गर्ने म नै थिए । स्टार्च सेरामिक्स (भरमोरा) तपाईलाई पनि थाहै छ । वीरगञ्जमा धेरैको मन जित्न सफल भएको परिणामस्वरुप नै संघिय राजधानीमा पनि शोरुम खोल्ने सपना थियो । र लामो समयको मेहनतपश्चात उक्त सपनाले सार्थकता पाएको छ ।
यहाँले भनेजस्तै अहिले बजारमा जाँदा थुप्रै टाइल्सका शोरुमहरु सञ्चालनमा छन् । ग्राहकहरुले हजुरको शोरुम रोज्नुको कारण के छ ?
तपाईले बडो गजबको प्रश्न सोध्नुभयो । खासमा अहिले जमाना नै प्रस्पिर्धाको हो । तर नकारात्मक प्रतिस्पर्धा हैन । सकारात्मक प्रस्पिर्धा गर्नेहरु नै सफल हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ । मेरो सानैदेखिको बानी । म जुन पनि काम गर्छु । अरुभन्दा फरक र नयाँ गर्न सकु भनेर सोचिरहन्थे । सायद यही बानीले गर्दा मेरो पेशा, व्यवसाय पनि सफल हुनेछ भन्नेमा म ढुक्क छु । अब कुरा गरौ यसमा के फरक र नयाँ छ त ? मैले देश तथा विदेशका समेत गरी सयौँभन्दा बढी शोरुमको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको छु । जसले गर्दा ग्राहकहरुलाई कस्तो किसिमको मन पर्छ ? भन्ने कुरामा केही अड्कल गर्न सक्छु ।
यसका साथै मेरा थुप्रै आर्किटेक ईन्जिनियर साथीहरु छन् । जोसँग सल्लाह सुझाव लिएर म काम गर्छु । शोरुमलाई पनि नयाँ तरिकाले सजावट गरिएको छ । जसबाट ग्राहकहरु अँझै आकर्षित हुन सक्छन् । त्यति मात्रै नभएर हामी व्यापार भन्दा पनि गुणस्तर र विश्वसनीयतामा विश्वास गर्छाै । तसर्थ धेरै बिक्रि गर्ने भन्दा पनि आउने ग्राहकलाई खुशी र सन्तुष्टी पार्न सकौँ भन्ने लाग्छ । यसैले गर्दा पनि अरु भन्दा स्टार्च मार्बल पृथक हुन सक्छ ।
शोरुमबाट हाल उपलब्ध सेवाहरु के के हुन् ?
हामीकहाँ अहिले टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाईटसँग सम्बन्धित हरेक सेवा सुविधाहरु उपलब्ध छन् । जसमध्ये फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, शौचालयमा प्रयोग गरिने टाइल्स, भान्सामा लगाईने टाइल्स यस्तै ग्रेनाईट खासगरी प्राकृतिक रंगमा आउँछ । तर हामीकहाँ कृतिम ग्रेनाईट प्राकृतिकभभन्दा अँझै बढी गुणस्तरीय र भरपर्दाेका साथै आफूलाई मन पर्ने रंगमा उपलब्ध छ ।
तपाईको सेवा क्षेत्र कहाँ कहाँ सम्म हो ?
वीरगञ्जस्थित शोरुमबाट बारा, पर्सा, हेटौडा, रौतहटसगँै सिमावर्ती शहर रक्सौलसम्मका सेवाग्राहीहरुले प्रत्यक्ष लाभ लिईरहेका छन् भने अब काठमाण्डौको शोरुमबाट काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलिखेल, बनेपा, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ् लगायतका क्षेत्रमा हामी काम गरीरहेका छौँ । र ग्राहकको आवश्यक्ता र मागअनुसार हामी चितवन, नारायणघाटसँगै पोखरा लगायतका शहरमा पनि शोरुमको शाखा विस्तार गर्ने योजनामा छौँ ।
हस् समय र संवादका लागि धन्यवाद ।
हजुरलाई पनि धन्यवाद ।।